၂ ဇွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇွန်လ၊ (၂)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၁၅၃)ရက်မြောက် (ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်လျှင် (၁၅၄)ရက်မြောက်) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၂၁၂) ရက် ကျန်သေးသည်။
၁.၁ သမိုင်းဦးကာလမှ ၁၆၀၀ ခုနှစ်ထိ
၁.၂ ၁၆၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ထိ
၁.၃ ၁၉၀၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ
သမိုင်းဦးကာလမှ ၁၆၀၀ ခုနှစ်ထိ[ပြင်ဆင်ရန်]
၄၅၅ – ရောမမြို့ သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးခြင်း: ဗန်ဒယ်လူမျိုးများ ရောမမြို့အတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍ မြို့အား သီတင်းနှစ်ပတ်အကြာ လုယက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။
၁၀၉၈ – ပထမ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ: ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပထမအကြိမ် အန်တီရော့မြို့အား သိမ်းပိုက်ခြင်း ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး မြို့အား သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအား ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပင် ပြန်လည်ဆင်နွှဲခဲ့ရသည်။
၁၆၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ထိ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၆၁၅ – ပထမဆုံးသော Récollet သာသနာပြုအဖွဲ့သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ရူအန်မြို့မှ ကွီးဘက်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
၁၆၇၆ – ပြင်သစ်-ဒတ်ချ်စစ်ပွဲ: ပြင်သစ်သည် ပါလာမိုတိုက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ရာ ၎င်း၏ ရေတပ်အင်အားကြီးမှုကို သေချာစေခဲ့သည်။
၁၆၉၂ – မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ ဆေးလမ်မြို့တွင် Bridget Bishop သည် စုန်းကဝေအတက် တက်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သော ပထမဆုံးသူအဖြစ် အစစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် ကြိုးပေးအပြစ်ပေးခဲ့သည်။
၁၇၆၃ – ပွန်တီအက် ပုန်ကန်မှု: ယနေ့ခေတ် မီချီဂန်ပြည်နယ်၊ မက်ကီနောမြို့အနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ချစ်ပီဝါ(အိုဂျီဘွေ)လူမျိုးတို့သည် လက်ခရော့ဂိမ်းကစားပြီး ဘောလုံးအား ခံတပ်တွင်း လိုက်ကောက်သည့်ဟန်ဖြင့် ခံတပ်အစောင့်များအား အာရုံလွဲပြီး မီချီလီမာကီနော့ခံတပ်အား သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။
၁၇၇၄ – Intolerable Acts: နေရာချထားရေးဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သင့်လျော်သော စခန်းချနေရာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါက အမေရိကား ကိုလိုနီနယ်မှ ဘုရင်ခံများသည် ဗြိတိသျှစစ်သားများအား မနေထိုင်သည့်အိမ်များ၊ အိမ်ဝန်းရှိ အခြားအဆောင်များ၊ ကျီများ သို့မဟုတ် အခြားသော အဆောက်အဦများတွင် နေထိုင်ခွင့် ပြုစေခဲ့သည်။
၁၇၉၃ – ပြင်သစ် တော်လှန်ရေး: ပဲရစ်အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဖရန်စစ် ဟန်ရီရော့ သည် ဂျင်း ပေါ မာရတ် ရွေးချယ်ထားသော ဂီရွန်ဒန် ၂၂ ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၁၈၀၅ – နပိုလီယံခေတ် စစ်ပွဲများ: ပြင်သစ်-စပိန် သင်္ဘောစုသည် ပြင်သစ်ခံတပ်မြို့ တည်ရှိရာ ပင်လယ်သို့သွား‌ရာ ဝင်ပေါက်ဖြစ်သည့် လူနေထိုင်ခြင်းမရှိသော ကျွန်းဖြစ်သည့် ဒိုင်းမွန်းရော့ခ်ကျွန်းအား ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သည်။
၁၈၃၅ – ဖင်နီးယပ် တေလာ ဘန်နမ်နှင့် သူ၏ဆပ်ကပ်အဖွဲ့သားများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပထမဆုံးသော ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ် စတင်ခဲ့သည်။
၁၈၄၈ – ပရက်ဂ်မြို့တွင် ဆလာ့ဗစ် ကွန်ဂရက် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၈၆၆ – ဖင်နီယန် ညီအကိုများအဖွဲ့သည့် ကနေဒါတပ်များအား ရစ်ဂျဝေးနှင့် အီရီခံတပ်တိုက်ပွဲတို့ ရှုံးနိမ်စေခဲ့သော်လည်း စီးနင်းမှုသည် များမကြာမီအချိန်အတွင်း ပြီးဆုံးသွားစေခဲ့သည်။
၁၈၉၆ – ဂူဂလီရယ်မို မာကိုနီသည် သူ၏ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းအတွက် မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကို လျှောက်ထားခဲ့သည်။
၁၉၀၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၀၉ – အဲဖရက် ဒီကင်သည် ဩစတေးလျနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တတိယအကြိမ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၁၀ – Rolls-Royce Limited အား ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူ ချားလ် ရိုးလ်သည် အင်္ဂလိပ် ရေလက်ကြားအား ဖြတ်သန်းပြီး မရပ်မနား နှစ်ကျော့ဖြတ်သန်းခဲ့သော ပထမဆုံးလူဖြစ်သည်။
၁၉၁၉ – မင်းမဲဝါဒီသမားများသည် မတူညီသော အမေရိကန်မြို့ကြီးများရှိ နေရာ ၈ နေရာအား ဗုံးဖောက်ခွဲခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၂၄ – အမေရိကန်သမ္မတ ကယ်လ်ဗင် ကူးလစ်ဂျ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း မွေးဖွားသော မူလအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားအားလုံးအား နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုသော အင်ဒီးယန်း နိုင်ငံသားဥပဒေအား ဥ‌ပဒေအဖြစ် လတ်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့သည်။
၁၈၄၀ – သောမတ်စ် ဟာဒီ၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စာရေးဆရာနှင့် ကဗျာဆရာ (၁၉၂၈ ကွယ်လွန်)
↑ Gwatkin၊ Henry Melvill; Whitney၊ James Pounder; et al. (1911)။ The Cambridge Medieval History။ Macmillan။ pp. 308။ On2June Gaiseric marched into Rome ... The Vandals stayedafortnight...
↑ Harari၊ Yuval Noah (2007)။ "The Gateway to the Middle East: Antioch, 1098"။ Special Operations in the Age of Chivalry, 1100–1550။ The Boydell Press။ pp. 53–73။
↑ The Americas။ Academy of American Franciscan History။ 1948။ p. 7။
↑ Philip Parker (2004)။ Collins Atlas of Military History။ Collins။ p. 65။ ISBN 978-0-00-716639-8။
ယနေ့ - ၂၂ မေ၊ ၂၀၂၂ [ရှင်းသန့်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂_ဇွန်&oldid=659367" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။